Astaamaha iyo baaxadda duufaantii María | Saadaasha Shabakadda
Kadib musiibooyinkii ay keeneen duufaantii Irma, tan wali ma dhamaan. Jasiiradaha Kareebiyaanka waxaa si xun u waxyeeleeyay Irma horraantii Sebtember. Si kastaba ha noqotee, waa inaad u diyaar garowdaa imaatinka duufaan kale oo cusub: Mariya.
Duufaanta María waxay ku bilaabatay duufaano kuleyl ah, laakiin maanta oo Axad ah waxay noqotay duufaan, iyadoo diiwaangelineysa dabeylo saacad dhan gaaraya 120 kiilomitir Ka warran duufaantaan cusub?
1 Duufaanta Maria
2 Talooyin ku saabsan duufaanta
Duufaantaan wali waa Qeybta 1 waxayna 200 kiiloomitir waqooyi galbeed ka xigtaa Barbados. Markay dhaqaaqdo, waxay gaari doontaa jasiiradaha Leeward caawa iyo berrito woqooyi-bari aad u daran ee Badda Caribbean-ka.
Duufaantan waxay awood u yeelan doontaa inay soo saarto mowjado waaweyn oo burburin kara dabayl awgood. Tani waxay sababi lahayd kor u kaca heerka badda inta udhaxeysa 1,2 iyo 1,8 mitir markaan dhex maro Jasiiradaha Leeward. Intaas waxaa sii dheer, waxay saadaalisay roobab ugu badan oo gaaraya 51 sentimitir jasiiradahaas, Puerto Rico iyo jasiiradaha Ingiriiska iyo Mareykanka ee Habeenkii Arbacada. Tani waxay sababi kartaa daadad culus iyo gogol-gooyo nafta halis geliya.
Sidoo kale ilaalada duufaanta waxaa ka mid ah jasiiradda Martinique, Antigua iyo Barbuda, Saba iyo Saint Eustatius iyo Saint Lucia. Halka jasiiradda faransiiska ee Guadeloupe ay heegan cas u gali doonto duufaanka laga bilaabo duhurkii Isniinta.
Talooyin ku saabsan duufaanta
Waxa ugu fiican ee xaaladahan ku jira ma ahan inaad guurto, laakiin waa inaad gabaad ka raadsato guryaha ama meelaha nabdoon. Wuxuu rajeynayaa in duufaanta Maria ay gaari karto qeybta 3-aad markay soo dhaafto magaalada Guadalupe. Mawjadaha ayaa dherer ahaan noqon kara 10 mitir oo dabeylo gaaraya ilaa 180km / saacaddii oo ay la socdaan 400-milimitir roob.
Duufaan labaad, José, sidoo kale waxay ka hawlgashaa badweynta Atlaantigga waxayna kicisay digniinta duufaanka kuleylaha ee waqooyi-bari Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Astaamaha iyo baaxadda duufaantii María
Ilaahay gacanta ha saaro